တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်လေးတစ်ခုကို ရရှိခဲ့လို့ အတိုင်းမသိအံ့သြပျော်ရွှင်ဝမ်းသာနေတဲ့ စွမ်းဇာနည် – Cele Top Stars
January 2, 2022 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်မင်းသားအဖြစ်နဲ့သာမကဘဲ ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ပါ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူကတော့ စွမ်းဇာနည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက စွမ်းလို့ တစ်လုံးတည်း အဖျားဆွတ်ခေါ်လေ့ရှိကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
အနုပညာအလုပ်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်ပြီး ချောမောခန့်ညားနေတဲ့ စွမ်းဇာနည်က မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်တစား အားပေးမှုကို ယနေ့အချိန်အထိ ရရှိနေဆဲ လည်း ဖြစ်ပါတယ်… ။
ယနေ့မှာတော့ သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိဘဲ ရလိုက်တဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်လေး တစ်ခုကြောင့် အတိုင်းမသိ အံ့ဩပီတိ ဖြစ်ရကြောင်းတွေဝေ မျှလာပါတယ် ။ ငွေကျပ် ငါးသိန်းပါဝင်တဲ့ ပန်းစည်းလေးရဲ့ ပုံတွေနဲ့ အတူ ” ဒီနေ့လဲ ဘယ်သူလဲမသိ ၅သိန်းတန် ပန်းစည်းလေရောက်လာ 😍 Thanks par ……… ❤️ ” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်…. ။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ ဇာတျမငျးသားအဖွဈနဲ့သာမကဘဲ ရုပျရှငျမငျးသားတဈယောကျ အဖွဈနဲ့ပါ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျကိုငျခဲ့သူကတော့ စှမျးဇာနညျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ ခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေ စှမျးလို့ တဈလုံးတညျး အဖြားဆှတျချေါလရှေိ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ…။
အနုပညာအလုပျကို ငယျစဉျကတညျးက ဝါသနာပါခဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ ပိုမိုတိုးတကျ ကောငျးမှနျအောငျ ကွိုးစားနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးဖကျရှငျကကြဝြတျဆငျပွီး ခြောမောခနျ့ညားနတေဲ့ စှမျးဇာနညျက မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့စိတျဝငျတစား အားပေးမှုကို ယနအေ့ခြိနျအထိ ရရှိနဆေဲ လညျး ဖွဈပါတယျ… ။
ယနမှေ့ာတော့ သူကိုယျတိုငျတောငျ မသိဘဲ ရလိုကျတဲ့ တနျဖိုးကွီး လကျဆောငျလေး တဈခုကွောငျ့ အတိုငျးမသိ အံ့ဩပီတိ ဖွဈရကွောငျးတှဝေေ မြှလာပါတယျ ။ ငှကေပျြ ငါးသိနျးပါဝငျတဲ့ ပနျးစညျးလေးရဲ့ ပုံတှနေဲ့ အတူ ” ဒီနလေဲ့ ဘယျသူလဲမသိ ၅သိနျးတနျ ပနျးစညျးလရေောကျလာ 😍 Thanks par ……… ❤️ ” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ…. ။